I-TCDD Iqesha Iinjineli | RayHaber
[11 / 12 / 2019] I-Sivas Ankara High Speed ​​Line Line iya kuhamba nini?	06 Ankara
ikhayaETURKEYUmmandla waseMntla Anatolia06 AnkaraUkuqeshwa kweNjineli ye-TCDD
28 / 11 / 2019 06 Ankara, 35 Izmir, Ummandla waseMntla Anatolia, Imisebenzi, railway, I-Turkish Aegean Coast, JIKELELE, ZOMHLATHI, ETURKEY
tcdd manani-manani uthenga iinjineli kunye ne-puantor
IRiphabhlikhi yaseTurkey State Railways (TCDD) amanqaku e-KPSS anezibalo, iinjineli kunye nezihloko zamapolisa kumaphondo nakwizithili ezahlukeneyo ngenkqubo yezabelo ephakathi zatyhala iqhosha lokufuna abasebenzi bakarhulumente.
I-State Railways 6 ibhengeze ukufunwa kwabasebenzi bakarhulumente kwi-OSYM ngokwazisa abasebenzi ngemfuno yabasebenzi ukuze bagcwalise izithuba ezingenabantu. Iikhowudi zokufaneleka zabasebenzi bakarhulumente ukuba baqashwe kwizixeko ze-Ankara kunye ne-İzmir Konak zapapashwa.
CandUmgqatswa uya kufumana iinkqubo zokufaka izicelo
I-YSYM iya kwenza wonke umsebenzi ofanelekileyo onxulumene neenkqubo zokunikwa kunye neenkqubo zokusetyenziswa. Njengokwabiwa okukhulu, alikho elinye iziko elinokwazi ukungenelela ekuqeshweni ngaphandle kwe-OSYM. Udliwanondlebe kunye neemviwo zomlomo ziya kuthathwa kubasebenzi bakarhulumente bangafaka izicelo kwiphepha le-OSYM lokudluliselwa kwabagqatswa.
I-TCDD iyakukhetha ukunika i-1 izibalo, iinjineli ze-2, kunye namanqaku e-3 ngokokusasazwa kwabasebenzi.
XA KUQALWA I-PREFERENCES
Ngokolwazi olupapashiweyo kwisikhokelo se-2019 / 2 yesikhokelo sokuhambisa, izicelo ziya kuqala kwi-3 ngo-Disemba 2019 kwaye ziphele nge-12 ngoDisemba. Izicelo ezikwi-Intanethi ziya kwenziwa ngeli xesha.
ISIQINISEKISO SESIFUNDO IPHONDO PCS
eThintelweyo Ankara 1
azibhale-unobhala Izmir 3
Ukuqeshwa kwabasebenzi kwi-TCDD 6 ekuhanjisweni kwabasebenzi Cofa.
Umhla wokuqala: 03.12.2019 10: 00
Umhla wokugqibela: 12.12.2019 23: 59
Intlawulo yokuqala: 20 TL
Iindawo zokuhlawula: Onke amasebe e-Akbank, i-ATM kunye neebhanki zeintanethi (ngaphandle kwabafakizicelo abavela kwi-TRNC); Onke amasebe eAlbaraka Türk Banking inxaxheba kwiBhanki, kwiATM kunye neebhanki zeintanethi (ngaphandle kwabafakizicelo abavela kwi-TRNC) Onke amasebe aseFinansbank, eATM kunye neebhanki zeintanethi (ngaphandle kwabafakizicelo abavela kwi-TRNC); Onke amasebe e-Kuveyt Türk Katılım Bankası, i-ATM kunye neebhanki zeintanethi (ngaphandle kwabafakizicelo abavela kwi-TRNC); Onke amasebe eTürk Ekonomi Bankası kunye neebhanki zeintanethi; I-Halkbank ATM, i-intanethi yebhanki kunye namasebe; Onke amasebe e-IN Bank kunye neebhanki ze-Intanethi (ngaphandle kwabafakizicelo abavela kwi-TRNC); Onke amasebe kunye neeATM zeBhanki yokuThatha inxaxheba yeVakıf (ngaphandle kwabafakizicelo abavela kwi-TRNC); I-Ziraat Bank isebenzisa kuphela i-intanethi yasebhankini kunye neebhanki ezihambahambayo (akukho ntlawulo ihlawulwayo kumasebe nee-ATM); Inkqubo yeNtlawulo yeKhadi ye-OSYM (https://odeme.osym.gov.tr/)
I-TUVASAS imemezela ukuthengwa kweenjini ze-19 kwiProjekthi yeSizwe yoThutho
Iinjineli zeKontrakthi ze-19 kwiProjekthi yeSizwe yoQeqesho
Ukwakhiwa kwiMetro Metro
Abaviwa beejineli abaza kuthatha uviwo lweProjekthi yeSizwe yoQeqesho
AbaNjineli beeNkqubo zeeNjineli zoMzila weSitayile, iiNkqubo zeSitimela…
TÜVASAŞ Uya kufumana i-43 Engineer ye-'Projekthi yeSizwe yoQeqesho '
I-TCDD Iyabasebenzi Abasebenzi abakhubazekileyo
I-TCDD yenza uMsebenzi oPhezulu weSikolo esiPhezulu esiPhezulu seSikhwama seKPSS
I-TCDD iqeshisa abantu ababethatywayo!
Ukuqashwa kwabasebenzi bakaRhulumente be-TCDD
Ukuqashwa kweenjineli zeTCDD